अपुरो निन्द्राले हाम्रो स्वास्थ्यमा ड र लाग्दा रोगहरु निम्त्याउछ थाहा नभए एकचोटि पढ्नुहोस् – ताजा समाचार
अपुरो निन्द्राले हाम्रो स्वास्थ्यमा ड र लाग्दा रोगहरु निम्त्याउछ थाहा नभए एकचोटि पढ्नुहोस्
अफिसमा छिर्नेबित्तिकै १० मिनेट यसो निदाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? अवश्य पनि तपाईं एक्लै हुनुहुन्न र आशा म रि स के को छैन । हामी राम्रोसँग सुत्न चाहन्छौं, तथापि धेरैलाई गाह्रो हुन्छ । अहिलेको समयमा यस्तो समस्या भोग्ने तपाई एक्लो हुनुहुन्न । यस्ता धेरै मानिसहरु यस्तै समस्या भोगिरहेका हुन्छन् ।
र यो पनि पढ्नुहोस : साझँको समयमा मोबाईल चलाउदा धातक रोगको सिकार भैईने ! सबैको जानकारीका लागि सेयर गरौ !